वाग्मती सफाइ महाभियान : अभियानकर्मीले सफा गरिरहने, फोहर फाल्नेले फालिरहने ? - kageshworikhabar.com
वाग्मती सफाइ महाभियान : अभियानकर्मीले सफा गरिरहने, फोहर फाल्नेले फालिरहने ?
६ मंसिर, काठमाडौं । वाग्मती सफाइ महाभियान शुरु भएको ४०० हप्ता हुन लागे पनि नदीमा फोहर गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन । पशुपति क्षेत्रको गौरीघाट, शङ्खमूललगायत सांस्कृतिकस्थलमा फोहर जम्मा भए पनि सरोकार भएका निकाय मौन बसेको सफाइ अभियानकर्मीको गुनासो छ ।
अभियानकर्मीले सफा गरिरहने र फोहर फाल्नेले फालिरहने हो भने वाग्मती सधैँ प्रदूषित नै हुने छ । अभियानकर्मी चक्रबहादुर चन्द शङ्खमूल क्षेत्रमा फोहर बढ्न थालेको बताउनुहुन्छ । सफाइमा स्थानीय सरकारले आवश्यकतानुसार ध्यान नदिएको अभियानकर्मीको गुनासो छ ।
Previous articleभर्चुअल बहस : विद्यालय पुनः सञ्चालनमा शिक्षकलाई अग्रमोर्चामा राख्न सुझाव
Next articleपछिल्लो २४ घण्टामा सुदूरपश्चिममा ६४ संक्रमित थपिए